AKHRISO: Guddiga Doorashada Baarlamaanka Hirshabeelle oo la shaaciyay | HalQaran.com
Home Warar Cusub AKHRISO: Guddiga Doorashada Baarlamaanka Hirshabeelle oo la shaaciyay
AKHRISO: Guddiga Doorashada Baarlamaanka Hirshabeelle oo la shaaciyay
Jowhar (Halqaran.com) – Iyadoo Sabtida maanta ah xildhibaannada Baarlamaanka 2aad ee dowlad gobolleedka Hirshabeelle lagu dhaariyay magaalada Jowhar ayaa hadane lagu dhawaaqay guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka Baarlamaanka ee maamulkaasi.
Guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Xildhibaan Maxamuud Siyaad Barqadle ayaa magacaabay guddi ka kooban Sagaal xubnood.
Xildhibaan Yuusuf Sheekh Xasan Macalin Jeelle ayaana loo magacaabay Guddoomiyaha guddiga doorashada Guddoonka 2-aad ee Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Guddigan ayaa waxay shaqadoodu tahay ka shaqeynta sidii loo qaba lahaa doorashada guddoonka cusub ee Baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
Haddaba halka hoose ka akhriso magacyada guddiga:
Guddiga doorashada baarlamaanka Hirshabeelle